ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၀၇
အစောပိုင်းတွင် ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်အား မိမိထံတွင် အမှုထမ်းရန် ဆင့်ခေါ်ခဲ့သော်လည်း ဂေါလျတ်ကို ဒါဝိဒ်သတ်ပြီးနောက် ဘုရင်ရှောလုက ဒါဝိဒ်အား “သင်သည် အဘယ်သူ၏သားဖြစ်သနည်း” ဟု အဘယ်ကြောင့် မေးခဲ့သနည်း။—⁠၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၆:၂၂; ၁၇:၅၈။
ရိုးရှင်းသောအယူအဆတစ်ခုမှာ ရှောလုနှင့်ဒါဝိဒ်တို့၏ဦးဆုံးတွေ့ဆုံမှုသည် တဒင်္ဂမျှသာဖြစ်သောကြောင့် ဒါဝိဒ် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှောလု မေ့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းသို့ဖြစ်ပုံမရ၊ ဘုရင်ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်အား သီးသန့်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး သူ့ကို အလွန်နှစ်သက်သွားကာ မိမိ၏လက်နက်ကိုင်ဆောင်သူအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်း ၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၆:၁၈-၂၃ မှတ်တမ်းက တင်ပြထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်ကို ကောင်းစွာသိကျွမ်းခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။
တချို့ကျမ်းပညာရှင်များက ၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၇:၁၂-၃၁ နှင့် ၁၇:၅၅–၁၈:၅ တို့သည် နောက်ပိုင်းမှရေးသားထားရာဖြစ်မည်ဟု ယူဆကြသည်၊ အကြောင်းမှာ ဘီစီဒုတိယရာစုတွင် ရေးသားပြီးစီးခဲ့သည့် ဟေဗြဲကျမ်းစာကို ဘာသာပြန်ထားသော ဂရိစက်ပ်တွားဂျင့်ကျမ်းမိတ္တူအချို့တွင် ဤအခန်းငယ်များမတွေ့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုစက်ပ်တွားဂျင့်မိတ္တူများကိုသာ အခြေပြုပြီး ထိုသို့ကောက်ချက်ချခြင်းသည် အမြော်အမြင်မရှိပါ။ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံအပ်သော ဟေဗြဲကျမ်းအခြားစာမူများတွင် ယင်းကျမ်းပိုဒ်ပါရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ဦးဆုံး အာဗနာကို၊ နောက်မှ ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်ကို မေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်၏ဖခင်အမည်ကို သိလိုရုံထက်မကချေ။ ဂေါလျတ်ကို အောင်နိုင်ခဲ့သည့် ထူးခြားသောယုံကြည်ခြင်းရှိသူနှင့် သတ္တိရှိသူအဖြစ် ဒါဝိဒ်ကို အမြင်သစ်နှင့်ရှုမြင်ပြီးနောက်တွင် ထိုသို့သောလူငယ်လေးကို အဘယ်သို့သောလူစားမျိုးက ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်ကို ရှောလုသိလိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်တွင် ရဲစွမ်းသတ္တိရှိကြောင်း တွေ့ ရခြင်းက ဒါဝိဒ်၏ဖခင် ယေရှဲ သို့မဟုတ် သူ၏အခြားမိသားစုဝင်များတွင်လည်း ထိုရဲစွမ်းသတ္တိမျိုး တွေ့ရနိုင်ဖွယ်ရှိသောကြောင့် သူတို့ကို စစ်တပ်ထဲသွင်းရန် ရှောလုစိတ်ကူးရှိခဲ့လိမ့်မည်။
၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၇:၅၈ တွင် “ကိုယ်တော်ကျွန် ဗက်လင်မြို့သားယေရှဲ၏သားဖြစ်ပါသည်” ဟူသော ဒါဝိဒ်၏တိုတုတ်သောတုံ့ပြန်စကားကိုသာ ဖော်ပြထားသော်လည်း တစ်ဆက်တည်းဖော်ပြချက်များက ထိုထက်မက စကားလက်ဆုံပြောဆိုနိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ ဤအချက်ကိုထောက်ရှုကာ စီ. အက်ဖ်. ကိုင်လ်နှင့် အက်ဖ်. ဒဲလစ်ရှ်တို့ မှတ်ချက်များကို မှတ်သားကြည့်ပါ– “‘ထိုသို့လျှောက်ပြီးသည်နောက်’ ဟူသည့် [၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၈:၁] ၌ တွေ့ရသောစကားအသုံးအနှုန်းက ရှည်လျားသော စကားလက်ဆုံပြောဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောကြောင့် ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်၏မိသားစုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်ဆင့်အကြောင်းအရာများကို သူနှင့်ဆက်၍ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသည်။”
ဤအချက်အားလုံးကိုထောက်သော် “သင်သည် အဘယ်သူ၏သားဖြစ်သနည်း” ဟူ၍မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ရှောလုသည် သူကောင်းစွာသိကျွမ်းသောဒါဝိဒ်အား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသိရှိရန်မဟုတ်ဘဲ ဒါဝိဒ်၏နောက်ခံကို သိရှိရန် ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။
[စာမျက်နှာ ၃၁ ပါ ရုပ်ပုံ]
ဒါဝိဒ်သည် မည်သူ၏သားဖြစ်သည်ကို ရှောလုအဘယ်ကြောင့် မေးမြန်းခဲ့သနည်း
က၀၇ ၈/၁ စာ. ၃၁
ဂျော်ဂျီယာစည်းဝေးကြီးတစ်ခုမှ “အံ့ဖွယ်ရာ” နှစ်ခု
သင်သည် ‘ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်တွင်ကြွယ်ဝသောသူ’ လော
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၀၇
သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၀၇
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၀၇